Nyocha ujọ na nsonaazụ ya - Ọzụzụ Nghọta
Here nọ ebe a: Home » Artikoli » Nyochaa nchegbu na nsonaazụ ya
Nnyocha ure bụ nchikota nke mgbaàmà uche, gụnyere nchekasị, ụjọ, esemokwu, na ụjọ ọdịda na-ada n'oge ọnọdụ ebe a na-enyocha gị. Ọ bụ subtype nke nchegbu metụtara mmetụta uche na ha na-esikwu ike mgbe mmadụ na-eche ule nke ikike ha ihu.
Ọ dị iche na ụdị nchegbu ndị ọzọ kemgbe isi na-elekwasị anya bụ na ọnọdụ nyocha ọ na-egosipụta onwe ya kachasị n'etiti ụmụ akwụkwọ niile ọkwa agụmakwụkwọ. A na-akpọkarị ya n'ụzọ dị iche iche dị ka nyocha ule, nchegbu agụmakwụkwọ, ma ọ bụ nrụgide ule, na nyocha na-egosi na ọ dị n'etiti 15% na 22% nke ụmụ akwụkwọ.
Nyocha nyocha na-emetụta arụmọrụ n'ihi mmetụta na-adịghị mma na nlekọta anya. Ọzọkwa, ọ dịgasị iche na mmadụ n'otu n'otu (dịka ọmụmaatụ, dabere na afọ na okike), dabere n'ọnọdụ na ụfọdụ ihe omume onwe onye na njirimara nwere ike ịbawanye ihe puru omume nke omume ya (ndị amụma). Na mgbakwunye, enwere ndịiche dị iche iche n'ihe metụtara ọnọdụ.
Ọtụtụ ndị nyocha agbaala mbọ ịtụle nchegbu nke ule, ma ewepụtala ngwaọrụ dị iche iche. N'ime ndị a, Nnwale Uche Ule Maka Childrenmụaka (TASC) a na-atụle ụkpụrụ ọla edo maka ịtụ ụjọ nchegbu ụmụaka.
N'iji ya tụnyere ụlọ ọrụ uche a, Otú ọ dị, ruo ugbu a, ọ dị ka enweghi ezi njirimara nke mmezi (ya bụ ihe ndị na-adịgasị iche na nchekasị) na ndị na-ebu amụma (yabụ ihe ndị dị adị nke na-eme ka enwee nchekasị na-eme). Dị ka ihe atụ, ụfọdụ ajụjụ ndị gbara ọkpụrụkpụ metụtara ihe ndị mejupụtara nsogbu a, otu ha si emetụta nchegbu, na otu ha si emetụta ụmụ akwụkwọ.
Also nwekwara ike inwe mmasị na: Mmezi nrụzigharị telefon mgbe ihe gbasara ahụrụ
Von Der Embse na ndị ọrụ ibe na 2017, site na meta-analysis dabere na nyocha 238 gara aga bipụtara kemgbe 1988, ha gbalịrị ịza ajụjụ ndị a.
N'ime akwụkwọ a, ndị ode akwụkwọ kọwara mmetụta nke ụjọ ule na ọrụ dịgasị iche iche a ga-arụ, ebe ha na-anwa ịghọta mgbanwe igwe mmadụ na nka mmekọrịta mmadụ na ibe ya.
Ndị a bụ isi nchọpụta:
okike. Mamụ nwanyị ga - egosiputa nchekasị nke ule karịa ụmụ nwoke.
Agbụrụ. Studentsmụ akwụkwọ sitere na agbụrụ pere mpe ga-ekwupụta oke ụjọ nke ule karịa ndị ọgbọ ha.
Nkà. Nchegbu ule ga-ebelata ka ọkwa ọkwa ụmụ akwụkwọ na-abawanye.
Ọdịiche dị iche iche. Diagnosedmụ akwụkwọ achọpụtara ADHD ha ga-egosiputa nchegbu dị elu karịa ụmụ akwụkwọ achọpụtabeghị.
Ọnọdụ nyocha. Nchegbu ule ga-abawanye mgbe a na-akọwa ule ọ bụla dị ka nyocha maka onye ahụ ebe ọkwa ga-adalata mgbe a na-ewepụta ule dị ka omume ma ọ bụ ohere mmụta.
Ebube onwe. Onwe onwe onye ga-ebelata nchegbu site na ịmara ihe ịga nke ọma mmadụ gara aga.
Ihe ngosi arụmọrụ. Nnyocha ule, mana akara akara ule na akara ugo dị ka ndị na-ebu amụma nyocha.
Grounds. Ihe omume a nke uche ga-ebelata nchekasị n'etiti ụmụ akwụkwọ ma nyere ha aka ịbawanye arụmọrụ.
Ebumnuche mmụta mmụta. Gbalị imeziwanye usoro mmụta nke mmadụ ga-emetụta n'ụzọ dị nta arụmọrụ na agụmakwụkwọ.
Ya mere nsonaazụ ga-egosi na nyocha nke ụjọ na-emetụta n'ụzọ dị iche iche na usoro dịgasị iche iche metụtara agụmakwụkwọ, gụnyere akara ule tozuru etozu, akara ule, na nkezi ọkwa ọkwa. Onwe onwe onye dika ihe di nkpa ma sie ike banyere uju ule. Ihe isi ike nke ule na mkpa dị na ya metụtara na nchekasị dị elu.
Na mmechi, site na nyocha a, ndị ode akwụkwọ na-akọ na enwere mmekọrịta doro anya n’etiti nchekasị ule na ọtụtụ mgbanwe gbanwere n’echiche. Agbanyeghị, ọ dị mkpa maka nyocha ọzọ iji mepụta ule iji tụọ ihe nrụpụta a nke enwere ike iji dị ka nyocha na nyochaa ọnọdụ dị egwu dị iche iche. Ngwá ọrụ ndị a nwere ike iduga nghọta ka mma banyere ọrụ nke mmetụta uche na arụmọrụ nke ga-enyekwara ndị ọkachamara aka na usoro agụmakwụkwọ iji melite arụmọrụ ụmụ akwụkwọ.
von der Embse, N., Jester, D., Roy, D., & Post, J. (2018). Nwalee nchegbu nchegbu, ndị na-ebu amụma, ma mezie: Otu afọ 30 nyochaa meta-analytic. Na-edeba Mmetụta Ndị Na-akpata Ahụhụ, 227, 483-493.
ule nchegbu, ịrụ ọrụ ụjọ, arụmọrụ arụmọrụ, nwalee ụjọ
Nyochaa nchegbu na nsonaazụ ya2020-08-302020-09-20http://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2017/08/nuovologo_87e9aa904327d53301f73f9191e17e49.pngỌzụzụ ọgụgụ isihttps://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2020/08/lansia-da-esame-e-le-sue-conseguenze.jpg200px200px